Ahoana ny fomba hanidiana ny fampiharana amin'ny andiany iPhone 12? - Ahoana No
Ahoana ny fomba hanidiana ny fampiharana amin'ny iPhone 12?
Raha efa nampiasa ny andian-dahatsoratra iPhone 12 ianao dia mety ho voamarikao fa ny fanidiana ny fampiharana mihodina ao aoriana dia tsy mandeha amin'ny fomba fanaon'ireo maodely teo aloha hatramin'ny iPhone 10 izay nanana ny endri-tsoratra bokotra. Ny bokotra an-trano ao amin'ny iPhones dia nampiasaina taloha hanakatonana na hifanakalozana eo anelanelan'ny fampiharana fa ankehitriny, nesorina ny bokotra an-trano ka nanome iPhone vaovao mikasika. Raha manontany tena ianao ny amin'ny fomba hanidiana ny fampiharana amin'ny iPhone 12, Apple dia nampiditra fihetsika fa tsy ny bokotra an-trano.
Apple dia nandefa ny andiany iPhone 12 vaovao vao haingana. Raha mpampiasa iPhone vaovao ianao na tsy nampiasa azy hatramin'ny maodelin'ny iPhone X dia mety hanana olana amin'ny fanakatonana ny rindranasao any aoriana ianao. Ny mpampiasa sasany dia mandao ny fampiharana any aoriana satria efa nilaza i Apple fa mihamangatsiaka ny fampiharana any ambadika rehefa mivoaka fampiharana ianao ary tsy mandany bateria na data. Saingy na dia rafitra miasa mahery vaika aza ny iOS dia tsy afaka amin'ny bug rehetra azo atao izy io. Noho izany, tsara kokoa ny manakatona ny fampiharana ambadika rehetra mba hisorohana ny be loatra amin'ny iPhone.
Andeha hojerentsika ny fomba fanidiana ny apps amin'ny iPhone 12.
Isaky ny mivoaka fampiharana ianao dia tsy manidy ny app izany. Noho izany, ny rindranasa efa niasa rehetra dia mihazakazaka hatrany aoriana. Ireo fampiharana dia tsy maintsy nakatona tanana mba hialana amin'ny bibikely sy fanantonana. Betsaka ny olona no tsy mihevitra fa ilaina ny manidy ny app any aoriana satria mihamangatsiaka na miantona raha vao mivoaka izany ianao. Saingy ny fampiharana sasany dia mahazo aina avy hatrany, mandany bateria ary misy ihany koa ny loza ateraky ny bibikely avy amin'ireo fampiharana kely kokoa izay tsy eken'ny iOS. Ny dingana hanakatonana ny fampiharana dia:
Atsofohy hatramin'ny saika ny faran'ny efijery dia tazomy izy mandritra ny segondra ary avotsory rehefa afaka mahita ny karatry ny fampiharana mihazakazaka ianao.
Sasao ny karatra fampiharana izay tsy tianao hampiasaina intsony.
Ankehitriny rehefa nesorin'i Apple ny bokotra an-trano tamin'ny telefaonin'izy ireo dia nanolotra fihetsika ho an'ny efijery izy ireo. Ny fihetsika etsy ambony dia tena zava-dehibe mba hahazoana antoka fa ny fampiharana tsy ilaina dia tsy mampiasa bateria na data.
Mikasa hividy Airpods?Taratasim-bola Apple AirPods Pro vs AirPods 2 fampitahana
Ahoana ny fampiasana app Switcher amin'ny iPhone 12?
Rehefa mampiasa fampiharana marobe miaraka amin'izay ianao dia afaka manampy hifindra mandroso sy miverina eo anelanelan'ny fampiharana ny app switch. Ny fihetsika ampiasaina amin'ny switch app dia mitovy amin'ny fanakatonana ny apps.
Atsofohy avy eo amin'ny farany ambany amin'ny fampisehoana telefaona, miato vetivety ary afaho.
Rehefa miseho ny karatry ny fampiharana, swipe miankavia na miankavanana mba hiova fampiharana.
Ahoana ny fomba hijerena ny foibe fanaraha-maso ao amin'ny iPhone 12?
Alohan'ny fanesorana ny bokotra an-trano ao amin'ny iPhone, ny fihetsika an-trano ampiasaina amin'izao fotoana izao dia hiantso ny Center Control. Ka ny Center Control dia nafindra avy any ambany ka hatrany amin'ny ankavanana ambony amin'ny efijery. Raha hijery ny Ivotoerana fanaraha-maso dia esory avy eo amin'ny zorony ambony havanana, izay aseho ny mari-pamantarana bateria.
Fa maninona no tsy nakatona ny fampiharana rehefa mivoaka azy io ianao?
Isaky ny mivoaka amin'ny rindranasa iray ianao dia ao amin'ny maody miantona fa tsy mikatona tanteraka. Ny antony tsy mikatona ny fampiharana dia ny hampidino haingana kokoa ireo fampiharana rehefa miverina miverina mampiasa azy ianao ary mampitombo ny fahombiazan'ny findainao. Manoro hevitra ny hanakatona ny fampiharana anao fotsiny i Apple rehefa mivaingana na tsy mandeha izy io fa ny fanidiana ny apps kosa dia hahomby amin'ny fampisehoana azy.
Azoko atao ve ny manidy ny fampiharana mihazakazaka rehetra ao amin'ny iPhone 12 indray mandeha?
Ny safidy hanakatonana ny rindranasa rehetra mihodina ao aoriana dia azo jerena ao amin'ny iPhone 12. Ny mpampiasa iray dia mila manidy ny rindranasa tsirairay tsirairay raha tsy maintsy atao izany. Ity dia ezaka iniana ataon'ny Apple hampiakarana ny haavon'ny fampisehoana iPhone.
Ilaina ve ny manidy ireo app ao ambadika?
Nanazava i Apple fa isaky ny mivoaka ny rindranasa iray ny mpampiasa dia hihamangatsiaka izy ary tsy handany bateria na data. Niniana natao sarotra ny fanidiana ireo fampiharana mba hahafahan'ny mpampiasa interface tsara. Rehefa manidy rindrambaiko ianao ary manokatra azy io dia mila fotoana fohy ny famoahana na fandefasana indray. Raha misokatra any aoriana ny fampiharana dia mitombo ny fahombiazan'ny fampiharana.
Na izany aza, misy ny fampiharana misy bug izay be loatra amin'ny iPhone, ary tsy hitan'ny iOS izany. Amin'ny tranga fampiharana mihinana bateria be loatra, tsara kokoa ny manidy azy ireo.
Ny andiany iPhone 12 vaovao dia manana Modely 4, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, ary iPhone 12 Pro Max . Izy ireo dia misy habe, loko, fitahirizana, fakan-tsary amin'ny alàlan'ny modely samihafa. Manolotra fifandraisana 5G ihany koa izy amin'ny maodely rehetra amin'ny faritra maro.
Ahoana no hamantarana ny iPhone sandoka 12, Mini & Pro Max?
Modely iPhone 12 Pro (A2341, A2406, A2407, A2408)
Ahoana ny fomba hijerena Hotstar any Etazonia?
fomba tsotra indrindra hahazoana karatra fanomezana amazona
misintona emulator android ho an'ny Windows
generator tambajotram-pifandraisana maimaim-poana
tsy misy famantarana hanoha riana sarimihetsika
mijery sarimihetsika any an-tsekoly tsy voasakana